Windsor Champions 2012
Kooxda Windsor ayaa ku guulaysatay koobkii Somali Canadian Association of Waterloo Region.
Tartankan oo ay si wacan usoo qaban qaabiyeen Jaaliyadda Soomaliyeed ee Waterloo iyo Kitchener, ayaa waxaa ka soo qeybgalay 5 kooxood.
Shantaas oo kala ahaa: Kitchener, Windsor, Hamilton, Seif-Toronto, Iftin-Toronto, ayaa waxaa loo qeybiyay 2 qeybood (Group)
Qaybta hore (Group A) waxaa isku aaday Kitchener, Iftin iyo Seif. Qaybtaas ayaa waxaa kasoo gudbay labada kooxood ee Kitchener #1 iyo Seif #2.
Dhinaca kale Kooxda Hillaac ayaa ka soo cudur daaratay tartankan sida awgeedna qeybta (Group B), ayaa Windsor iyo Hamilton keliya ku loolameen iyagoo u tartamay, koow iyo Labo. Guushii waxay raacday Windsor oo noqotay #1, halka Hamilton ka noqotay #2.
Haddaba is reebreebkii dambe ( Semi-final) oo aad u xiiso badnaa ayaa waxaa foodda is daray Kitchener iyo Hamilton, kooxda Hamilton ayaa reer Kitchener kaga naxsatay goolal is daba joog ah oo gaaray ilaa 4, halka Kitchener ay hal gool keliya lahaayeen gelinkii hore.
Gelinkii dambe ayaa reer Kitchener isasoo habeeyeen, oo 3 gool si degdeg ah ula yimaadeen taaso keentay barbardhac.
Laakiinse inanka Hamilton uga ciyaara afka hore ee Qaasim ayaa goolkii guushii xireeyay, isagoo weliba u dabaal degay sidii laacibkii macruufka ahaa ee Roger Milla.
Ciyaartii labaad oo iyadu aad u xiisa badnayd ayaa waxaa foodda is diray laba kooxood oo iyagu aad isu yaqaan ee Windsor iyo Seif .
Kooxda seif ayaa reer Windsor 2-1 uga hormartay gelinkii hore.
Laakiinse ilayn ciyaari waa gelin dambee , gelinkii dambe ayaa Windsor, Seif dhulka ku jiiday, inkastoo laaacibiinta reer Windsor kulligood wacdaro dhigeen , haddana waxaa xusuus mudan mar uu laacibka Cabdirisaaq ee reer Windsor, labada laacib ee Seif oo difaaca taagnaa si aan caadi ahayn ugu caga kala wareejiyay, gool macaanna ka xireeyay.
Sidoo kale Maxamed Yemeni iyo Nabulsi ayaa one , two heer sare ah ka xireeyay. Cabdiraxmaan yarena si aan caadi ahayn ayuu uga xiroonayay difaaca Seif, taasoo sababtay goolal badan oo gaaray ilaa 7 haba ugu fiicnaadee kii uu xireeyay Cabdifataax yare oo garoonka dhan loogu sacabtumay., waxay ciyaartu kusoo gabagabowday 7-4, oo ay Windsor guushu ku raacday.
Ciyaartii Finalka ayaa kooxda Windsor si dhib yari ah ku mareen kooxda Hamilton, iyagoo 3-0 kaga adkaaday.Nabulsi ayaa darbad aad u xoog wayn ku furay goolasha, oo xatta garsooruhu uusan arag meel ay martay. Gool labaadna Cabdirisaaq ayaa si kedis ah uga dhaliyay Gooliga Hamilton, kan seddexaadna Cabdiraxmaan ayaa khatimay. Khadka difaaca ah oo ay isu bedbedalayeen Maxamed, Ahmedin, ahmed dheere iyo Sharmaarke ayaa ahaa khad aan la taaban Karin, sidoo kale inanka da’da yare e Ajax ayaa khadka dhexe aad u xoojiyay markasta uusoo galo garoonka.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Waterloo/Kitchener iyo Odayaasha magaalada ayaa qaybiyay miidaaliyaadkii iyo koobabkii loogu tala galay koobkan.
Waxaa gool dhalinta la siiyay laacibka Kitchener Nafiis, waxaa qaatay laacibka ugu ciyaarta wanaagsanaa (MVP) Cabdirisaaq-Windsor. Koobkii kaalinta labaad waxaaa la guddoonsiiyay Hamilton, Koobkii kaalinta koowaad (champion) waxaa la guddoonsiiyay kooxda Windsor.
Intaas kadib waxaa kooxaha guubaabiyay Guddoomiyaha Jaaliyadda (SACWR) Mr.Osman Mohamud iyo ku xigeenkiisa Mr.Sabriye iyo Tababaraha reer Kitchener Mr.Hassan Haybe, iyo odayaasha magaalada oo dhamaantood u mahad celiyay dhalinyaradii kakala timi Ontario magaalooyinkeeda kala duwan
W/D Ahmed Al-Matary